व्यक्तिपूजा, भ्रष्टाचार र बहिरो संस्कृति नेकपाका समस्या हुन् - युवा नेता चौलागाई - Rajmarga
व्यक्तिपूजा, भ्रष्टाचार र बहिरो संस्कृति नेकपाका समस्या हुन् – युवा नेता चौलागाई
युवराज चौलागाई विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापितभएका नेकपाका इमान्दार, भद्र, शालिन, बौद्धिक नेता हुन् । हाल, उनी नेकपाको केन्द्रिय सदस्य तथा प्रबास समन्वय कमिटिका अध्यक्ष छन् । उनै चौलागाईसँग नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा राजमार्गले गरेको कुराकानी ।
पार्टीभित्र अहिले दुई वटा खतरा छ । एउटा फुटेर जाने र आरोप प्रत्यरोपमा लाग्ने । अर्को, हामी मिल्यौं है भन्ने तर बिधि, पद्दती र न्याय अलपत्र दोबाटोमा छोडिने । ती दुबै अबस्थाबाट नेकपालाई बचाउनु पर्छ । त्यो भनेको सार्थक एकता हो । विचार, भावना, गन्तव्य सहितको एकताले मात्र नेकपालाई बचाउन सक्छ।
नेकपा फुटको संघारमा पुगेको हो ?
नेकपाको एकता संकटमा पुगेको हो । जुन उद्देश्य, कार्य योजना र विचारबाट पार्टी एकता भएको थियो त्यसतर्फ काम हुन नसकेको हो । एकताको संकट भनेको फुटको निकट भन्ने पनि होला तर फुटि सकेको अथवा मिल्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन । एकतामा संकट परेको हो । फुट्छ की भन्ने आशंका बढेको हो ।
पार्टीका आगामी दिन कसरी अगाडि जाला भन्ने बिषयमा आममानिसहरुले परिकल्पना गरेभन्दा अलि फरक दिशामा पार्टी गयो । तर, फुट पक्का छ भन्ने होइन । नेकपामा अझै पनि एकताको संभावना छ ।
नेकपाका नेताहरु पार्टी संचालनमा कहाँ नेर चुके ?
नेकपा नेतृत्वले अहिले पार्टी र सरकार दुवै एकै पटक संचालन गर्नु परेको स्थिती छ । पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्नको लागि ठोस विचार, संगठनको निश्चित मुल्य मान्यता, ठोस संस्कृति, ठोस कार्यक्रमहरु हुनुपर्ने हुन्छ । यो बीचमा पार्टी जाम भएर बस्यो, सञ्चालन भएन । यसले नेपालको राजनीतिक डिस्कोर्स संचालन गर्न सकेन । न यसले विरोधी पार्टी माथि आफु हावि भएर प्रभाव जमाउन सक्यो । नेपालको सामु आइरहेका राजनीतिक, समाजिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा, पार्टी र पार्टीबीचको सम्बन्धमा, जनताको सन्र्दभमा कुनै पनि सकारात्म राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सकेन ।
संगठन सकृयतापुर्वक संचालन हुन सकेन । एकदम जाम भएर ठुलो गाडी वर्षैंसम्म चौरमा राखेको जस्तो भयो । सकृय रुपमा डेलीभरी दिने काम गर्न सकेन । सस्कार संस्कृतिमा व्यक्ति पुजा, भ्रष्ट्राचार, जनताको आलोचनाहरुलाई नसुन्ने खालको बहिरो सस्कृति हामीले निर्माण ग¥यौं । व्यक्तिपुजा, भ्रष्टाचार, बहिरो सस्कृति नेकपाको समस्या हो ।
समग्रमा हेर्दा नेकपाले बैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक, सांस्कृतिक समस्याहरुलाई उचित समाधान दिन सकेन । सामाजिक अन्तरविरोधहरुको समाधान, राजनीतिक अन्तरविरोधहरुको समाधान र सम्बोधन गर्न सकेन ।
पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउन, गतिशिलता दिन युवा नेताहरुको सकृय भुमिका देखिदैन नि?
नेकपा एउटा निकै लामो इतिहास भएको पार्टी हो । यसका नेताहरु संगठनको अभ्यासबाट खारिएर आएका छन् । नेकपाको विवाद पार्टीभित्र नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक बुझाई र संगठनात्मक सिद्धान्त छ । तसर्थ, पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्र नै समाधान गर्ने र बाहिर छलफल गर्नेभन्दा भित्र बसेर गर्नु राम्रो हुन्छ । हालै एक तिहाई केन्द्रिय सदस्यहरुबाट केन्द्रिय कमिटिको माग भएको छ । यसबीचमा नेतृत्वलाई पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन होस्, मुल्य मान्यताहरुमा स्खलन नआओस् भनेर खबरदारी र दवाव दिने काम जारी छ । मुल कुरा युवाले के गरे भन्ने भन्दा नेतृत्वले कसरी सोचेको हुन्छ भन्ने हो ।
नेकपा र यसका युवा नेताहरुप्रति जनताले आश गरे अनुसार त युवा नेताहरुले भुमिका खेल्न सकेको छैन ?
त्यो कुरा हुन सक्छ । समग्रमा नेकपाप्रतिको आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको हो भने नेकपाभित्रको युवा पंक्तिमा पनि प्रश्न खडा हुन्छ । नेकपाप्रति आश नहुने तर नेकपाभित्रको खासखास युवाहरुप्रति मात्र आश रहने पनि कमै होला । मलाई के लाग्छ भने नेकपाभित्र भइरहेका खास गरी युवाहरु वा नेतृत्वतहको एउटा ठुलो पंक्ति नै नेकपालाई चलायमान, एकिकृत, गोलबद्ध तर रुपान्तरण सहितको, जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउन मेहनत र खबरदारी गरिरहेकै छ । कतिपय त्यसमा कमीकमजोरीहरु होलान तर त्यसलाई समय क्रममा सुधार्दै लैजाने, परिवर्तन गर्दै, सिक्दै अघि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्दछ ।
सरकारको कार्यशैली पार्टी संकटका लागि कति दोषी छ ?
सरकारको मुख्य नेतृत्वको कार्यशैलीको यसमा भुमिका छ । अहिले हाम्रो सिष्टममा प्रधानमन्त्रीले जसरी चाह्यो त्यसरी सरकार चल्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र हुनुहुन्न पार्टीको पहिलो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीभित्रको समस्यालाई ठिक ढंगले समाधान गर्न, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न, जनता र सरकारसँगको समस्याको ठिक ढंगले समाधान गर्न तयार भएको भए ठुलो समस्या आउँदैन थियो । आजको मुख्य समस्या के हो भने पार्टीलाई एउटा विधी प्रकृयाबाट चलाउने कि खास एउटा नेतालाई एकापटि तुलोमा राख्दा पार्टी भन्दाभारी हुने ? प्रधानमन्त्रीका केही बिशेष अधिकार होलान् तर लोकतन्त्रमा पार्टी र सरकार बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रमुख हो । यो बिषयमा प्रधानमन्त्री अस्पष्ट देखिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो बिषयमा स्पष्ट भएको भए यो समस्या आउँदैन थियो ।
नेपालको इतिहासमा संविधान जारी भए पछि महत्व राख्ने यो तेस्रो सरकार हो । पहिलो २०१५ सालको विपी कोइरालाको सरकार । दोस्रो २०४७ सालको संविधान निर्माण पछिको गिरिजा सरकार । त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीहरुले सरकार र पार्टीबिचको सम्बन्धलाई मिलाउन नसक्दा त्यसबाट सरकार मात्र हैन, पार्टी पनि पछि परे । अझै अगाडी बढेर त्यसबाट व्यबस्था नै बदनाम भएर पछि भित्रभित्रै मक्किएर सकिए । यो सरकारले ती सरकारहरुको अवस्थाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ ।
हामीले भर्खर संविधान जारी ग¥यौं । हामीले नयाँ किसीमले काम गर्नु पर्ने थियो । तर काम नगर्ने ठुला ठुला गफ गर्ने मात्र ग¥यौं । मात्रात्मक अवस्थामा केही विकास भए । तर, यस बीचमा जे भए त्यो व्यबस्था वा विकासको नयाँ मोडल हैन ।
हरेक कुरामा भ्रष्ट्राचारको हल्ला हुने अनि नेतृत्व त्यसलाई ढाकछोप गर्न तिर लाग्नु पर्ने । अहिलेको सरकार प्रमुखको भुमिकाले पार्टीभित्र र सिंगो मुलुकमा अन्यौलको अबस्था सिर्जना गरेको छ । यो उहाँले समय छंदै बुझ्नु पर्छ ।
पार्टीलाई फुटबाट बचाउने सुत्र के हुन सक्छ ?
पार्टी एकताबद्ध हुन पर्छ । तर एकता भनेर एउटाको पाउमा अर्को परेर हुने कुरा होइन । हिजो जुन आधारबाट एकता भएर अगाडि बढे त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । जनमत र भावनालाई केन्द्रमा राखेर पार्टी संगठनात्मक अवस्था, जिम्मेवारी लगायत सबै कुरामा अभिव्यक्त हुने गरी एकता हुनु पर्दछ ।
पार्टीभित्र अहिले दुई वटा खतरा छ । एउटा फुटेर जाने र आरोप प्रत्यरोपमा लाग्ने । अर्को, हामी मिल्यौं है भन्ने तर बिधि, पद्दती र न्यायलाई अलपत्र दोबाटोमा छोडिने । त्यसबाट नेकपालाई बचाउनु पर्छ । त्यो भनेको सार्थक एकता हो । विचार, भावना, गन्तव्य सहितको एकता हो ।
पार्टी नेताहरुको बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री निवासमा मिटिङ बसेको छ । उहाँहरुले पार्टीलाई विधिमा चल्न, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गरेको स्थिती छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको अडानले पार्टी विभाजन हुन्छ की भन्ने डर छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले दूर गर्नु पर्दछ । पार्टीभित्र रहेका बहुमत सदस्यहरुले भनेका कुराहरुलाई अपमान गरेर हुँदैन । पहिलेको सहमतिको आधारहरु तिर फर्किएर सच्चिएर जानु पर्दछ । अरुले भने भनोस म मान्दिन भन्ने गरी जाने हो भने पार्टी एकता बचाउन गाह्रो हुन्छ ।
Previous post:बसको ठक्करबाट प्रहरीहबल्दारको मृत्यु
Next post:निर्मला पन्त प्रकरण : कसको थियो त्यो सर्टको टुक्रा ?